မနက်ဖြန်ပဲ ကာကွယ်ဆေး ရတော့မလို ထင်ပြီး ထင်တိုင်းကြဲနေတဲ့ လူတချို့ မေ့နေတဲ့ စကားတခွန်း - Zet Star
မနက်ဖြန်ပဲ ကာကွယ်ဆေး ရတော့မလို ထင်ပြီး ထင်တိုင်းကြဲနေတဲ့ လူတချို့ မေ့နေတဲ့ စကားတခွန်း
လူတွေက “ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက် ပို၍ထိရောက်ပါသည်” ဆိုတဲ့စကားကို အလေးမထားကြတာလား မသိရိုးအမှန်ပါ။ နေ့စဉ် သတင်းအတိုအထွာတွေရဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုပဲ မျှော်လင့်နေပုံပဲ။
ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ် science lab က၊ ဘယ် companies တွေကဖြင့် ကိုဗစ် ဆေးစစမ်းသပ်တာ အောင်မြင်တယ်တို့၊ အခုပဲ နိုင်ငံတကာကနေ cargo planes တွေနဲ့ .. ဆေးတွေလာပေးတော့မည်ပုံပဲ မျှော်လင့်နေတော့ – လက်ဘက်ရည်ဆိုင် မုန့်လေးပါဆယ်ထွက်ဝယ်တောင် mask မတပ်တော့။ “ရပါတယ်” “မလိုပါဘူး” “ဒီနား ဘယ်သူက ကိုဗစ်ဖြစ်နေလို့လဲ” “ဟိုဖက်မြို့နယ်ပဲကြားတာ ဒီဖက်မှာ မရှိပါဘူး” “လက်ခဏခဏဆေးရလို့ အရေခွံလန်တော့မယ် .. ရတယ် .. ဒါလေးပဲ သယ်လာတာ .. ဆေးမနေတော့ဘူး .. ဘာမှ မဖြစ်လောက်ပါဘူး” “ဟိုကောင် face shield ကြီးနဲ့ .. အပိုတွေလုပ်နေတာ .. အရူးကြီးကျနေတာပဲ” “ဆေးကပေါ်နေပြီ ခဏနေရင် လာတော့မှာ” စတာတွေ ကြားဖူးမှာပါ။
တကယ်ကြောက်လို့ .. မိမိ နဲ့ မိမိမိသားစု ပတ်ဝန်းကျင်ကို တကယ်ကြီး .. ကာကွယ်ချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ မဟုတ်ပဲ .. တော်ရိရော်ရိ အဖြစ်ပဲ လုပ်ကြတယ်။
လတ်တလော မဟားဒယား တက်လာတဲ့ ကူးဆက်မှုဟာ ကာကွယ်တဲ့နေရာမှာ အားနည်းနေလို့ပဲ။ ကိုယ်က ကာကွယ်တောင် တဖက်က မကာကွယ်ရင် ကူးနိုင်တာပဲ။
လူတွေက မလုပ်နဲ့ဆို လုပ်ချင်ကြတယ် .. လိုက်နာရမယ်လို့ ပြောရင် ဆန့်ကျင်တတ်ကြတယ်။ စည်းကမ်းထုတ်တိုင်းတာ လိုက်နာရင် ငါးပါးသီလတို့ ကိုးကွယ်မှု scriptures တွေထဲ တားမြစ်တဲ့အရာတွေ အလုပ်ဖြစ်မှာပေါ့။ ထိုနည်းတူစွာ အမှိုက်မပစ်ရဆို အဲဒီ ဆိုင်းဘုတ်အောက်မှာ သွားပုံတယ်။ Control လုပ်ရင် against လုပ်တယ်။
အရပ်ထဲ မုန့်ထွက်ဝယ်ဖို့ Mask မတပ်မိရင် မျက်ထောက်နီကြီးတွေနဲ့ သတ်မည့်ပုံနဲ့ ဝိုင်းကြည့်ရင်တောင် ဟိုကောင်တွေနဲ့ ပြသနာမဖြစ်အောင်ဆိုပြီး အဖြစ်တပ်တယ်။ တကယ်တန်း တကယ်ကြီးကို ကာကွယ်ချင်လို့ မဟုတ်ဖူး။
ဆေးတွေ ဘာညာတွေက သတင်းပဲ .. လတ်တလော ကိုယ့်လက်ထဲမှာ မရှိဘူး။ ကိုယ်နဲ့ ရှိနေတာက ကိုယ့်အသက်နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ မိသားစုအသက်တွေ။
အဲဒါကြောင့် ဆေးသတင်းတွေမြင်တိုင်း အခုပဲ corona go .. go corona ဆိုတဲ့ ဥုံဖွ ပျောက်စေသဘောမျိုးနဲ့ ပျောက်သွားတဲ့ ဆေးမရှိဘူး။ အရင့်အရင် HIV တို့ B ပိုး C ပိုး စတာတွေကို ပျောက်တဲ့ဆေး မပေါ်သေးဘူး .. သူတို့ကို inactive လို့ခေါ်တဲ့ မလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ အဆင့်ရောက်အောင်နဲ့ ပိုးကောင်ရေ detect လုပ်မရနိုင်တဲ့ အနေအထားရောက်အောင်ထိပဲ ကုထုံးရှိတာ။ တကယ်တန်း virus ဟာ သတ်လို့ မရဘူး။ (မယုံရင် Google မှာ ရှာကြည့်)
နောက် ဆေးတန်ဖိုး .. တခေတ်က တော်ရုံ ဘာပိုး ညာပိုးအတွက် ဆေးကုတောင် သိန်းချီ – တခါတလေ ရာချီပါတယ်။ အလကားကုပေးနေသလို ဖြစ်နေတော့ ဖြစ်ရင် ငါ့ကို ambulance နဲ့ လာခေါ်ပြီး ကုပေးကြမှာပဲ ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုးကြောင့် medical bill အတွက်မပူ။ အကယ်၍သာ .. ICU စရိတ်ကို တရက် ဘယ်ျလာက်ဆိုတဲ့ semi level hospital rate နဲ့သာ charges လုပ်ရင် ကုန်ကျစရိတ်အတွက် လန့်နေမယ်။ ပြသနာက အခုလို ပေးခိုင်းရင် လမ်းထိပ်က ဆေးဆိုင်က antibiotic ဆေးတွေနဲ့ ကျိတ်ကုကြမယ်။
နောက်ပြီး ပြောချင်တာက .. flu – influenzas တွေက နှစ်စဉ် မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းနေတာ။ အရင် ၂ နှစ် ၃ နှစ်ဖလာက်က ကာကွယ်ဆေးဟာ အခုနှစ်မှာပေါ်တဲ့ flu ကို မကာကွယ်နိုင်ပြန်ဘူး။ အခု ကိုဗစ်လို မျိုးရိုးဗီဇ ၃ မျိုးလောက်ရှိတဲ့ virus ဟာ တကယ်တန်း ဦးနှောက်စားစရာ။
Coronavirus COVID-19 single dose small vials and multi dose in scientist hands concept. Research for new novel corona virus immunization drug.[/caption]
အဲဒီတော့ စိတ်ဖြေတဲ့သဘောနဲ့ ဆေးတွေ လာတော့မယ်တို့ ခဏနေရင်ပဲ cargo plane နဲ့ ဆေးသိန်းချီ လာပေးတော့မယ့် သတင်းထက် .. တကယ်ကြီးကို မိမိကိုယ်တိုင်က ဆေးလက်ဝယ် မရောက်မချင်း ကာကွယ်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ သူများအားကိုးတာ မလုပ်သင့်သလို .. မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်း မပေါ့သင့်ပါ။
နို့မို့ဆို နေ့စဉ်ကူးနေတဲ့ rate ဟာ အောက်ကိုကျမလာပဲ ပိုပိုများလာတာ စိုးရိမ်စရာပါ။
← ထိတွေ့မှု မရှိတဲ့ လူနာတွေ များလာခြင်းနဲ့ ကိုဗစ်ရဲ့ လှည့်စားမှုတွေ မန္တလေးမှာ စပြီ
ကိုဗစ် အိန္ဒိယထိုးဆေးရဲ့ လူတွေ သိပ်မသိသေးတဲ့ အကြောင်းတရားနဲ့ ဆေးတန်ဖိုးအမှန်အကန် →